Antsirabe: Zandary mamo nitera-doza, roa naratra
jeudi, 06 juillet 2017 15:51
Nitrangana lozam-pifamoivoizana vao maraina teto an-tananan’Antsirabe androany alakamisy 06 jolay. Fiara kely BMW iray netina zandary avy nisotro toaka tao amin’ny hotely iray misy toeram-pandihizana teo Ampihaviana no nirimorimo fandeha ka nifatratra tamin’ny fiara minibus Mazda iray mpitatitra olona, efa feno mpandeha nikasa ho any Ilakaka, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina.
Olona roa no naratra tamin’izany, dia ny mpandeha teo amin’ny ilay havanana anoloan’ilay Mazda sy ny mpamily ilay fiara mpitatitra. Nambaran’ilay mpamilin’ilay Mazda fa saika hitsoaka tamin’ny fiarany ihany ilay zandary saingy nosakanan’ny olona ary nesorina teny aminy ny fanalahidin’ny fiara vao nijanona izy.
Avy eo dia norahonany indray ilay mpamily taksiborosy fa tsy mahalala azy hono fa mila amboarina ny fiarany fa tsy mila hiantsoana mpitandro filaminana izany.
Tonga moa ny teo anivon’ny Polisim-pirenena saingy niala maina ka niantsoana Zandary nanao ny fanamarinana. Niteraka fitohanana vao maraina moa ity lozam-pifamoivoizana ity satria hatramin’ny tamin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 9 ora sy sasany dia mbola nifandrirarira teo ny andaniny sy ankilany ka tonga ny Zandary mpiara-miasa tamin’ilay namoa-doza nandamina izany.
Mamo tampona ilay Zandary mpamily niteraka ny loza ka sarotra ny fifampiresahana ary nisy mihitsy ny fandrahonana ilay mpitondra taksiborosy.
Izany moa ny endrikin'ny "Izahay no mitondra sy anay ny Pouvoir izao" aty Antsirabe.
Alli Ordering In Canada Amoxicillin 100mg Ct [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Buy Ciprodex Viagra Pfizer
mardi, 21 novembre 2017 19:54
Amoxil 250mg [url=http://levibuying.com]levitra non prescription[/url] Internet Pharmacies Legal
Prix Viagra Pharmacie Quebec [url=http://cialtobuy.com]generic cialis[/url] Best Buy Direct Bentyl Drugs Fish Flex Cephalexin Ok For Dogs
lundi, 30 octobre 2017 21:17